अजित मिजारहरुको रगत खसीको रक्ती हो सरकार ? - Namaste Post
अजित मिजारहरुको रगत खसीको रक्ती हो सरकार ?
नमस्ते पोस्ट २०७३, ६ भाद्र सोमबार ०८:४२ 0
अड्डा, अदालत र कानुनी झण्झटबाट पिडीतहरुले नेपालमा एउटा चर्चित आहान बनाए– कानुनका नौ सिङ हुन्छन् । कहिले कहिले त कानुन केवल बहुअर्थी अक्षरहरुको निष्प्राण डङ्गुर हो झैँ पनि लाग्छ । कानुनका धारालाई पत्याइदिने हो भने नेपालमा २०२० सालतिर नै जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने थियो । राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनको एउटा कुनामा जातिय भेदभाव दण्डनीय छ भन्ने आशयको वाक्य राखिदिएकै थिए । तर महेन्द्रले मुलुकी ऐन जारी गरेको ५३ बर्ष पछिपनि नेपाली माटोमा अजित मिजारहरुको खुनको फाल्सा बगिरहेकै छ ।
गत असारमा काभ्रेका सत्र बर्षीय अजित मिजारको लाश धादिङको गजुरीमा फेला प¥यो । मृतकले आफ्नै गाउँमा कथित उपल्लो जातकी कल्पना पराजुलीसंग प्रेम बिवाह गरेका थिए । अजितको प्रेम बिवाह जातीय छुवाछुतको कारखाना चलाइरहेको विभेदकारी समाजलाई मन पर्ने कुरै भएन । उमेर नपुगेको तर्कसहित उजुरी लिएर कल्पनाका माइति काभ्रेस्थित पाँचखाल प्रहरी चौकीमा पुगे । प्रेम बिवाह गरेका अजितका दम्पतिलाई जबर्जस्ति छुटाइयो– बालबिवाहका नाममा । उनीहरुलाई छुटाएर मात्र कल्पनाका माइतिको जातीय अहंकारमा पुगेको ठेस मेटिएन । कल्पनाका माइतीले पटकपटक अजितलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । धम्की दिएको केहि समयपछि नै अजित धादिङको गजुरीमा मृत फेला परे । अजितको लाश फेलापरेपछिको विकसित घटना झनै हृदयविदारक र आश्चर्यलाग्दो छ ।
प्रहरीको पोष्टमार्टम झनै शंकास्पद
अजितको घटनालाई नजिकबाट हेरेका र निरन्तर सडक संघर्षमा रहेका राजेश नेपालीले आइतबार संविधानसभा भवन अगाडिको प्रदर्शन सकेपछि यस घटनासंग सम्बन्धित एउटा आश्चर्यलाग्दो सन्दर्भ सुनाए । जब मिजारको बेवारिसे लास गजुरीमा भेटियो, स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालयले ‘मृतकको जिब्रो बाहिर निस्किएकाले उनको आत्महत्या’ भएको भन्दै लासलाई गाडेका थिए । लासको जिब्रो बाहिर निस्किएकै कारण आत्महत्या भएको भन्ने तर्क आफैंमा हास्यास्पद रहेको नेपाली बताउँछन् । दलितहरु जब सामाजिक उत्पिडनको सिकार भएर मारिन्छन्, प्रहरी रिपोर्टमा नयाँ नयाँ शब्द र तर्कले जन्म लिने गरेको बिडम्वना सुनाए राजेशले ।
मिजारको बारेमा एउटा अनलाइनले समाचार प्रकाशित गरेपछि घटना राष्ट्रब्यापी भयो । विभिन्न अधिकारकर्मी संघसंगठनहरु सडकमा ओर्लिए । संयुक्त दलित संघर्ष समिति, राष्ट्रिय दलित आयोग र मृतकका आफन्त धादिङ पुगेर गाडिएको लासलाई निकाल्न दबाब दिए । हाम्रो आफन्तको लास बुझ्न चाहन्छौं भन्दै दबाब दिएपछि प्रहरीले मिजारको लासलाई पोस्टमार्टम गरेर चिरफार पारेको र जमिनबाट पाँच फिट गहिराइमा गाडेकाले निकाल्न नमिल्ने जिकिर ग¥यो ।
गजुरी पुगेको अधिकारकर्मी र मृतकका आफन्तको टोलीले उक्त लास जे–जस्तो अवस्थामा भएपनि सनाखत गर्ने भन्दै दबाब दियो । टोलीको तिब्र दबाबका कारण प्रहरीले अन्त्यमा लासलाई निकाल्यो । तर लासलाई निकाल्दा कुनै चिरफार नगरिएको र जमिन मुनि करिब एक फिटमात्र गाडिएको अवस्थामा भेटिएको दलित अधिकारकर्मीको दाबी छ । मृतक कपडासहित नै गाडिएको अबस्थामा फेला परेका थिए । लासलाई मृतकका आफन्त र अधिकारकर्मीको पहलमा टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जमा ल्याइयो । उनीहरुले पुनः पोस्टमार्टमका लागि दबाब दिए । तर मेडिकल साइन्सको सिद्धान्तमा प्रहरीले एक पटक पोस्टमार्टमा भइसकेको रिपोर्ट दिएपछि अर्कोपल्ट पोस्टमार्टमा गर्न नपाइने मान्यता घटनाको निस्पक्ष छानबिन गर्नका लागि अर्को तगारो भयो ।
त्यसपछि मृतकका आफन्त र दलित अधिकारकका लागि कृयाशिल संघसंस्थाहरु घटनाको निष्पक्ष छानविनको मागसहित प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समक्ष पुगे । यतिबेलासम्म घटनाको छानविनको मागसहित सडक संघर्ष चर्किसकेको थियो । आन्दोलनको दबाबका कारण गृहमन्त्रालयले गजुरीको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पुनः पोस्टमार्टम गर्ने अनुमति दिन निर्देशन दियो । धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालयले अघिल्लो पटकको पोस्टमार्टमको क्रममा मृतकले मादक पदार्थ सेवन गरेको रिपोर्ट दिएको थियो । तर दोश्रो पटकको पोस्टमार्टममा मृतकले मादक पदार्थ सेवन नगरेको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । यी यावत तथ्यले घटना सामान्य प्रकृतिको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।
अजित मिजारहरुको रगत खसीको रक्ती हो ?
खसीको रक्ती मांसभक्षकको सु–स्वादु भोजन हो । रगत नै भएपनि बधसालामा खसीको रक्ती हेरेर धेरैको ¥याल ग्रन्थी रसाउँछ । यसको अर्थ खसीको रगतले खास ठूलो अर्थ राख्दैन । यो केवल एउटा प्रिय परिकार हो धेरैका लागि । तर मान्छेको रगत जब बग्छ धेरैको संवेदना जाग्रित हुन्छ । कतिले अनाहकमा बगेको मानिसको रगतलाई साक्षी राखेर ठूल्ठूला क्रान्तिमा सपथ खान्छन् । त्यसैले मानिसको रगत र खसीको रगतमा आकाश जमिनको फरक छ । मानिसको रगत परिवर्तनको आन्दोलनमा उर्जाशील प्रतिक पनि हो । तर यतिबेला अजित मिजारको रगत देखेर शासकहरुको मन अमिलो भएको छैन । कानमा कपास कोचेर कुम्भकर्ण निद्रामा रहेको सिंहदरबारले सायद अजितहरुको रगतलाई खसीको रक्ती देख्दो हो । तर शासकहरुको मुर्दा शान्तिले उत्पीडितहरुको मनमा मसाल बालेको छ । यो मुर्दा शान्तिको परिणाम सुखद हुने लक्षण देखिएको छैन ।
पछिल्लो अजित मिजार प्रकरण कुनै दुर्घटनावश घटेको सामान्य घटना होइन । जातिय उत्पिडनको बर्बर भट्टीमा निर्मित सामाजिक चेतनाको अवश्यम्भावी परिणती हो । यो देशमा युगौँदेखि अजितहरु अकारण मारिन अभिसप्त छन् । करिब दुईहजार बर्षभन्दा अघिदेखि यो भुगोलमा जन्मिएको मनुस्मृति शिक्षाको कोर्रा आजपर्यन्त दलितहरुको ढाडमा बज्रिरहेको छ । कानुनका कपटी शब्दले अजित मिजारहरुलाई न्याय दिन नसकेको नाङ्गो सत्य हाम्रै अगाडि मौजुद छ । त्यसैले यसको उचित हल निकाल्न नसकिएको खण्डमा अझ ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।